Rindrambaiko HomePod Version 15 Beta Mety hohetaheta | Avy amin'ny mac aho
Ny rindrambaiko HomePod kinova 15 Beta dia mety hiteraka hafanana be loatra
Tony Cortes | | Apple products
Avy eto hatrany Manoro hevitra izahay hanohitra Mametraha rindrambaiko beta navoakan'ny Apple ho an'ny fitaovanao. Izany dia miasa ho an'ny mpamorona mba hitsapana, amin'ny fitaovana ananan'izy ireo amin'izany, mba hitsapana sy hamantatra ireo bibikely izay mety asehon'ireto betas ireto.
Saingy misy hatrany ireo mpampiasa adventurous izay te ho voalohany manandrana ny vaovao momba ireo beta ireo, alohan'ny ofisialy ho an'ny rehetra. Raha ianao dia iray amin'ireo "tsy manam-paharetana" izay manandrana ny rindrambaiko beta kinova 15 ho an'ny HomePodsMitandrema satria afaka mihoapampana ny mpandahateny anao. Ary tsy hampitandrina anao i Siri fa voan'ny tazo izy.
Na dia ny teknolojia beta an'ny HomePod sy HomePod mini rindrambaiko aza dia misy ara-teknika ho an'ny mpampiasa vahiny ihany, ny mombamomba ny fitaovana ilaina amin'ny fametrahana ny rindrambaiko beta dia azo jerena amin'ny alàlan'ny fikarohana Google haingana. Midika izany fa ny olona tsy nasaina hanatrika ny fandaharam-pitsapana Voadinika azon'izy ireo atao ihany ny mametraka ny firmware beta ho an'ny HomePod.
Ka raha ianao dia iray amin'ireo mpitsangatsangana izay vonona hanandrana hatrany ny Apple betas alohan'ny dikan-teny ofisialy, tandremo raha nametraka ny beta kinova 15 ny rindrambaiko ho an'ny HomePod anao, satria manome olana vitsivitsy izy, manan-danja kokoa na kely kokoa.
Fitarainana isan-karazany ataon'ny mpampiasa ao amin'ny Reddit
Amin'ny sehatra malaza Reddit, misy kofehy misokatra momba ny lesoka toy izany. eto Mpampiasa maro no manazava fa manoro hevitra izy ireo ny amin'ny famongorana ny HomePods misy azy ireo izay mafana eo an-tampony, satria mety hiteraka tsy fahombiazan'ny motherboard izany.
Ny iray amin'ireo fitarainana mahazatra indrindra amin'ny kofehy misokatra toy izany dia ny hafanan'ny HomePod hafanana tsy ara-dalàna rehefa mihazakazaka ny beta 15, ary amin'ny tranga sasany dia mihidy tanteraka ny HomePod, angamba noho ny overheating.
Ny olana dia matotra, satria ao amin'ny HomePod dia tsy misy fomba azo atao mamerina rindrambaiko taloha apetraka. Tsy maintsy miandry an'i Apple izahay hanangana beta vaovao hanitsiana ny lesoka. Ka raha izao no anao dia esory, ary miandrasa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Ny rindrambaiko HomePod kinova 15 Beta dia mety hiteraka hafanana be loatra
Apple dia manitatra any ivelan'ny Silicon Valley mba hakana talenta vaovao
Miseho ny prototype an'ny Apple Watch ceramic